Finfinnee/Oromiyaa:Ayyaana Irreechaa Milkii! Fulbaana 2020 – Kichuu
HomePhoto GalleryFinfinnee/Oromiyaa:Ayyaana Irreechaa Milkii! Fulbaana 2020
Finfinnee/Oromiyaa:Ayyaana Irreechaa Milkii! Fulbaana 2020
Qeerroowwan lixa oromiyaa irraa !!
Irreecha Bara kanaa Guyyaa 23 fi 24 /1/2013 ALH Finfinnee fi Hora Arsadiitti kabajamuu Tokkuummaa fi Bifa adda ta’een itti hirmaachuuf waliif galameera.Magaalaa Hoolotaa ,Giincii,Amboo ,Hangs Mandii fi Beegii dabalatee Jala bultii irraa Jalqabee Wal eegnee Hiriira galuun Oromiyaan Marti yeroo sa’a Wal fakkaatu Finfinnee seenuu jalqabna.Sagntaa guutuu wal fakkaatu Fuula duratti ibsina.
Kabajaa Irreecha Birraa 2020 Ilaalchisee Waamicha Qeerroorraa Darbe.
Akkuma beekamu Oromoon waggaa keessatti Irreecha gurgurdaa yeroo lama kabajata. Irreechi kunis Irreecha Malkaa kan booruun gannaa darbee booqaa Birraa keessa kabajamuu kan galatni itti Uumaaf galfamuu fi Irreecha Tulluu kan boonni darbee Afraasaan akka toluuf itti kadhannaan Tulluurratti gaggeeffamu dha.
Haaluma kanaan Irreecha Malkaa (Birraa) kan Hora Finfinnee Fulbaana 23/2013 ALH (Onkoleessa 03/2020) fi Hora Harsadii Fulbaana 24/2013 ALH (Onkoleessa 04/2020) bara kanaa kabajuuf bu’uruma murtii fi qajeelfama Abbootii Gadaatiin haala ulfaataa Oromoon akka Sabaatti ajjeechaa Qaalii keenya jaalatamaa Artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hoogganoota qaqqaalii Oromoo jumlaan hidhamuu booda keessa jiru kana keessatti namuu qophiirratti argama. Kanumarraa ka’uun Qeerroo Oromiyaa waamicha armaan gadii kana dabarsa.
1. Qeerroon, Qarreen, dargaggoon hundi, manguddoon, haawwan, fi firoonni Oromoo marti Ayyaana kana kabajuuf naamusa baratamee fi qajeelfama Abbootii Gadaa hordofuun Irreecha lamaanurratti uuffannaa aadaa Oromootiin faayamee akka kabajatu waamicha goona.
2. Labsii Muddamaa Koronaaf bahee garummoo meeshaa cunqursaa siyaasaa ta’ee tajaajila ture dhumatus dhibeen Covid_19 kun babal’achaa jiraachuun waan beekamuuf Uummanni Irreecha kanaaf yeroo manaa bahu wantoota Dhibee Koronaa (#Covid_19) ittisuuf oolan kanneen haguuggaa afaanii fi funyaanii (maaskii), qulqulleessituu jarmii akka saanitaayizarii ykn alkoolii faa qabachuun akka hirmaattan waamicha goona. Harka walfuudhuu fi tuttuqaa qaamaarraa of qusatee fageenya isaa eeguun akka kabajatu, qaawwa gama kanaan uumamee hirmaattota ayyaanichaa dararuuf hiree uumu kamuu ofirraa cufuun kabajachuunis barbaachisaa ta’uu dhaamna. Warri Finfinnee jiraattanii fi dandeettisaa qabdan hirmaattotaaf ‘facemask’ fi sanitizer akka gumaachitan dhaamna.
3. Uummanni Oromoo bal’aan qaamoota kabaja Irreechaa guufachisuu fedhaniif haala hiree uumuu hin dandeenyen akka qophaa’u waamicha goona. Qeerroo Qarreen keenya armaan dura godhaTuttuqaa miira keessa galchuu adda addaa bira dabruun milkiin Kabajamuu Ayyaanichaaf qooda feesisu akka bahattan waamicha goona.
4. Kanneen qaamooleen nageenyaa mootummaa keessa jirtan Ayyaanicha nageessuuf Foollee waliin tahuun akka aantummaa uummatummaa keessan mirkaneessitan waamicha goona.
5. Foolleen Oromiyaa akkuma barametti qajeelfama Abbootii Gadaa hordofuun Ayyaanicha nageessuuf yoomiyyuu caalaa qophii barbaachisu akka gootan dhaamna.
6. Uummattoonni biyyattii kanaa hundi saboonni marti Ayyaana kana obboleewwan isaa Oromoo waliin kabajachuudhaan yeroo hamtuu Oromoon keessa tanatti aantummas fi Obbolummaa isaa akka irra deebiin mirkaneessan waamicha goona. Ayyaanicha akka ayyaana keessaniitti kabajachuus ta’ee daawwachuuf mirga guutuu qabaachuu keessan mirkaneessina.
7. Dhumarratti Irreechi baranaa kan Hora – Finfinnee, Hora Harsadii-Bishooftuu fi Irreechi bakkayyuutti kabajamu kamuu
A. Uummata Oromoo fi firoota Oromoo hundaafuu milkii gaariin kan fidu akka tahu,
B. bilisummaa, walqixxummaa, abbaabiyyummaa fi birmadamuummaan kan keessatti dhugoomu akka ta’u,
C. kan ajjeechaan, hidhaan, dararaan itti nurraa dhaabbatu akka ta’u hawwii hunda keenyaa ta’uu ibsina.
Ayyaana Irreechaa Milkii!
Mirga wabiitiin Lidatuu Ayyaalew akka bahu manni murtii ajajee jira. Himanni shororkeessummaa Iskindir Naggaa akka fooyya’u manni murtii ajajee jira. Garuu kaleessuma Jawa fi Baqqalaa faa himatni shororkeessummaa fi gosa adda addaa 10 kan irratti baname. Akkanatti Oromoo tuffatanii Oromoo bulchuuf yaaduu? “Hin bari’u seetee manatti …” jedhama mitii ree?
#Ethiopia: #Oromia Court grants 100, 000 birr bail to Lidetu Ayalew
Oromoo quba qabaadhu!Milishoota Gandaa waraanatti erguuf murta’e !!